Maqaallada Ravi Chalaka on Martech Zone |
Maqaallada by Ravi Chalaka
Ravi Chalaka waa CMO ee Jifflenow iyo khabiir ku xeel-dheer Suuq-geynta iyo Horumarinta Ganacsiga, oo abuura oo fuliya istiraatiijiyado ganacsi, abuurista dalab iyo kor u qaadista wacyiga / soo-saarka suuqyada tartanka. Sida VP ee Suuq geynta shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn iyo kuwa yaryarba, Ravi wuxuu dhisay kooxo adag iyo sumado wuxuuna awood u siiyay kobaca dhakhsaha badan ee xalal badan oo ku saleysan Big Data, SaaS, AI iyo IoT software, HCI, SAN, NAS. Ravi wuxuu haystaa shahaadada MBA ee Suuqgeynta iyo Maaliyadda waana afhayeen uhadlaya warshadaha iyo soojeediyaha
MQLs Waa Passé - Miyaad Abuureysaa MQMs?
Arbacada, Agoosto 19, 2020 Talaado, Agoosto 18, 2020 Ravi Chalaka
MQM waa lacagta suuqgeynta cusub. Kulamada uqalma Suuqgeynta (MQM) ee leh rajada iyo macaamiisha ayaa dhaqaajinaya wareegga iibka si dhakhso leh oo kor ugu qaada dhuumaha dakhliga sifiican. Haddii aadan digitireyneynin maylka ugu dambeeya ee ololahaaga suuq-geynta taasoo horseedeysa guulo badan oo macaamiil ah, waxaa la joogaa waqtigii laga fiirsan lahaa hal-abuurnimada suuqgeynta ugu dambeysay. Waxaan si fiican ugu jirnaa isbeddel ciyaar-beddelasho ah oo ka socda adduunka MQL-yada oo loo maro adduun kaas oo wadahadal-diyaar u ah hoggaamintu ay yihiin lacagta suuqgeynta aasaasiga ah. The
Jifflenow: Sidee Aaladda Qalabaynta Kulankani u Saamaynaysaa Dhacdada ROI
Inta badan shirkadaha waaweyni waxay sameeyaan maalgashi wax ku ool ah oo ku saabsan munaasabadaha shirkadaha, shirarka, iyo xarumaha warbixinnada iyadoo la rajeynayo in la dardargeliyo kobaca ganacsiga. Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha dhacdooyinka waxay ku tijaabiyeen moodallo iyo habab kala duwan si ay ugu tiiraanyeeyaan qiimeyadan. Tilmaamaha ugu badan ee la soo saaro, dareenka warbaahinta bulshada, iyo sahaminta kaqeybgalayaasha si loo fahmo saameynta dhacdooyinka ku saabsan wacyigelinta sumadda. Si kastaba ha noqotee, shirarku waa qayb aasaasi ah oo ganacsi. Si loo guuleysto, ganacsiyada waa inay qabtaan istiraatiijiyad